Sakafo | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Tibetana ravin-dite (kyfir kefir): fanangonam-bozaka, fampiasana ary fananana ara-pahasalamana
Ny holatra Kefir dia tsy mitovy amin'ireo mponina any an'ala. Vonton-tsakafo fotsy (tsilo eo amin'ny ronono vita amin'ny ramanavy) izay toy ny ramanavy. Tena ilaina ve ny holatra kefir, ary ahoana no azo ampiasana izany? Ny tantaran'izao tontolo izao Na dia tamin'ny andro fahiny aza, ny moanina Tibetana dia nahatsikaritra fa ny ronono nohosaina tamin'ny vilany tanimanga dia nivadika tamin'ny fomba samihafa.
Ahoana ny fomba hiarovana ny ahi-maitso ao an-tokantrano: fomba fitsaboana miaraka amin'ny sary amin'ny ririnina
Ny vanim-potoam-pisakafoanana dia iray amin'ireo olana goavana eo amin'ny fiainan'ny vehivavy miasa ao an-tokantrano: betsaka tokoa ny zavatra atao mba hahazoana antoka fa ny fianakavianao dia omena maimaim-poana ho an'ny ririnina, ary ny fitoerany ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra dia feno sakafo ho an'ny karazam-borona rehetra. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hijery karazana fomba fanao tsotra roa isika mba hikarakarana voankazo voajanahary ho an'ny ririnina, izay hahafaly anao amin'ny fahafahan'izy ireo sy ny famerenana haingana azy, ary ny valiny dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
Ahoana ny handany ny ririnina sy hihaona amin'ny lohataona, na ny fomba tsara indrindra 7 tsara ho an'ny pancakes amin'ny Shrove Tuesday
Ao amin'ny tontolo maoderina, Maslenitsa dia tsy ankalazaina toy ny tamin'ny andron'ny renibeny, fa amin'ny fotoana iray ihany dia tsy mbola very ny maha-zava-dehibe ny fanontaniana momba ny fihinana ireo pancakes. Izany no antony ilazantsika amin'ny antsipiriany 7 fomba mahazatra mahasoa mandritra ny herinandro fankalazana manontolo, fa aleo aloha hitodika any amin'ny tantara.
Ahoana no hanamboarana marinade ho an'ny elatra eo amin'ny giro, enina resipe
Sakafo marefo, mamy, malefaka ary mangatsiatsiaka nohosorana amin'ny kofehy ... Tahaka izany sary izany dia matetika no mitelina ny menaka ianao, ary raha manampy amin'ny fanoritsoritana teo aloha ianao, dia mampiavaka ny zavamaniry ao amin'ny marinade, dia te-hiala eo amin'ilay toerana ianao ary mandehana haingana any amin'ny mpivarotra ho an'ny hanina vaovao , hanamboatra sy hanipy haingana ny lavaka.
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo